Top 10 kaniini ee 2017 | Androidsis
Muddadii kirismaska ​​ayaa soo socota, in kasta oo aan horay uga soo tagnay Black Friday iyo Cyber ​​Monday, haddana weli waa suurtagal hel dalab aan caadi ahayn si aad u qanciso baahiyaheena farsamada ama rabitaankeena. Sannadihii ugu dambeeyay, kiniiniyadu waxay joojiyeen inay ikhtiyaar u noqdaan isticmaaleyaal badan, maxaa yeelay adeegsiga iyaga laga sameeyay uma baahna awood badan, sidaas darteed taariikhda cusboonaysiinta marwalba waa la fidiyaa.
Haddii aad ka mid tahay kooxdaas isticmaaleyaasha ah ee qorsheynaya inay cusbooneysiiyaan kiniiniyaddooda Kirismaskan, waxay u egtahay in xilligan aanad garanayn meel aad aaddo, badeecooyinka ku cusub suuqa, kuwaasoo noo siiya qiimo ka wanaagsan lacag ahaan. Qodobkaan waxaan isku dayeynaa inaan shaki kaaga saarno waana ku tusi doonaa 10ka kiniin ee ugufiican ee leh Android in aan hadda iibsan karno.
Sanadihii la soo dhaafay, awoodda kiniiniyada, iyo sidoo kale tayada shaashadahooda, ayaa si aad ah u kordhay, waqtigan xaadirka ahna, waxaan ka heli karnaa moodello heer sare ah oo awood u leh inuu daboolo baahi kasta, ha ahaato sameynta dukumiintiyo, ilaa tafatirka fiidiyowyada, inaad ku raaxeysato cayaaraha aan jecel nahay.
Ma aha in qof kastaa leeyahay baahiyo isku mid ah marka la iibsanayo ama la cusbooneysiinayo kiniinkiisii ​​hore, sidaa darteed waxaan isku dayayaadoon dhammaan inta u dhexeysa qiimaha laga heli karo suuqa, si loo isku dayo in loo daboolo baahiyaha xirfadeed ee badan ee isticmaalayaasha qaar ay lahaan karaan, sida baahiyaha caadiga ah ee inbadan oo idinka mid ah, sida daawashada filimada, hubinta boostadaada ama shabakadaha bulshada ...
1 Kiniiniyada Android oo leh shaashad ilaa 8-inji ah
1.1 Dabka Amazon 7 / Naarta HD 7
2 Kiniiniyada Android oo ka badan 8 inji oo shaashad ah
Kiniiniyada Android oo leh shaashad ilaa 8-inji ah
Dabka Amazon 7 / Naarta HD 7
Haddii adeegsiga aan ka sameyn doonno kaniinigayaga lagu soo koobay la-tashiga shabakadaha bulshada, sameynta raadinta internetka iyo daawashada filimka aan caadiga ahayn, Amazon waxay na siineysaa Amazon Fire 7 iyo Fire 7 HD, kiniinno ay ku kala duwan yihiin oo keliya Waxaan ka helnaa booska lagu keydiyo, isagoo ah 8 GB qaabka Fire 7 iyo 16 GB oo ah qaabka Fire 7 HD. Labada noocba waxaa maamula processor-ka MediaTek MT6582 waxaana weheliya 1 GB oo RAM ah, in kastoo hawlgalkeeduna ka badan yahay dheecaanka.
Amazon Fire 7 waxaa lagu qiimeeyaa 69,99 euro, halka nooca HD-na lagu qiimeeyo 79,99 euro.
Iibso Amazon Fire 7
Habka loo yaqaan 'Fire 8 HD' waxaa maamusha isla processor-ka sida qaabka Fire 7, laakiin qaabkan, RAM-ka waxaa lagu balaariyay 1,5 GB halka keydku uu yahay 16 GB iyo 32 GB. Xallinta shaashadda ayaa sidoo kale la ballaariyay marka loo eego Dabka 7, laga bilaabo 1024 x 600 illaa 1280 x 800 pixels. Kaydinta dhammaan noocyada Amazon Fire waxaa lagu ballaadhin karaa iyadoo la adeegsanayo kaarka microSD waxaana lagu maamulaa fargeeto ah Android 6.0, oo aad u fudud oo u baahan ilo yar, markaa labadaba RAM iyo processor-ku ma ahan kii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay.
Amazon Fire HD 8 waxaa laga heli karaa kaliya Amazon 110 euro loogu talagalay qaabka 16 GB iyo 129 euro loogu talagalay qaabka 32 GB.
Iibso Amazon Fire HD 8
Huawei sidoo kale waxay na siisaa qiimo jaban oo raaxo leh in lagu isticmaalo qaab 8-inji ah, gaar ahaan 8,4-inch, MediaPad M3, oo ah kiniin ay maamusho Processor Kirin 950 oo ay weheliyaan 4 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keyd gudaha ah. Jirkeedu wuxuu ka samaysan yahay aluminium wuxuu na siinayaa naqshad qurux badan oo leh dhinacyo cidhiidhi ah. Shaashadu waxay na siineysaa xalka 2560 x 1600 pixels, waxaa maamula Android 6 gudahana waxaan ka heleynaa batteri dhaqaajiya dhamaan set oo leh awood dhan 5.100 mAh. Huaweri MediaPad M3 Waxay ku leedahay qiimo Amazon qiimaha 279 euro.
Soo iibso Huawei MediaPad M3
Qaabka 7,9-inch ee ZenPad ee ka socda Asus, wuxuu na siinayaa qaraar 2048x 1535 pixels ah waxaana maamula processor-ka Qualcomm's Snapdragon 650. Gudaha, marka lagu daro batari 4.680 Mah ah, waxaan ka helnaa 2 GB oo RAM ah oo ay weheliso 16 GB oo keyd ah oo aan ku ballaarin karno isticmaalka kaararka microSD. Sida moodooyinka cusub ee imanaya suuqa, waxay iskuxireysaa nooca USB ee isku xirka C, kaasoo noo saamaxaya inaan u dirno kaliya ma ahan xogta xawaare sare leh, laakiin sidoo kale fiidyow iyo maqal wada jir ah. Qiimaha Asus ZenPad 3 8.0 waa 312 euro on Amazon.
Iibso Asus ZenPad 3
Shirkadda Shiinaha ayaa soo gashay Spain iyadoo furaysa dukaankeedii ugu horreeyay ee rasmi ah ee Yurub waxayna ka gashay albaabka hore. oo ay gabaabsi ka yihiin dhammaan wax soo saarkooda, In kasta oo xaqiiqda ay xoogaa ka qaalisan yihiin haddii aan ka iibsanno annaga oo soo marnay degellada kala duwan ee wax soo saarka Aasiya oo aad caan u noqday sannadkan oo dhan. Xiaomi waxay noqotay hal soo saare oo dheeraad ah markay tahay cusbooneysiinta ma ahan oo kaliya taleefanka casriga ah, laakiin sidoo kale kiniinkeena, maadaama mahadsanidiin Xiaomi Mi Pad 3, waxaan kuheli karnaa farahayaga, kiniin aad u wanaagsan oo leh qiimo aad u kooban.
Xiaomi's Mi Pad 3 wuxuu na siinayaa shaashad 7,9-inji ah oo xallinta 2048 x 1536 pixels ah. Gudaha waxaan ka helnaa processor Mediatek MT8176 oo ay la socdaan 6 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd gudaha ah. Batariga wuxuu leeyahay awood dhan 6600 Mah oo culeyskiisuna waa 328 garaam. Qiimaha Xiaomi Mi Pad 3 waa 490 euro on Amazon.
Kiniiniyada Android oo ka badan 8 inji oo shaashad ah
Ma bilaabi karno darajadan annaga oo aan ka hadlin Samsung, mid ka mid ah shirkadihii ugu horreeyay ee soo saara Android ee doorta suuqan. Galaxy Tab S3, oo leh shaashad 9,7-inch ah, wuxuu na siinayaa processor Qualcomm Snapdragon 820 oo ay wehliyaan 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah oo gudaha ah, in ka badan awood ku filan iyo keyd si aad uga faa’iideysato qalabkan, iyo si sidoo kale dhowr sano ayey ina qaadan doontaa.
Moodelkan qaaska ah waxaa loogu talagalay kaliya maahan inaan ku qaban karno waxqabad kasta oo la socda, laakiin si aan ugu raaxeysanno filimadayaga ugu xiisaha badan ama taxanaha ah mahadsanid afar ku hadla horumariyayaal ah oo uu qoray AKG / Harman kuna yaalliin geesaha qalabka si ay u abuuraan dareen ah dhawaq wax ku ool ah oo wax ku ool ah.
Batariga 6.000 mAh waa yara yaraa, laakiin waa ku mahadsantahay waxay taageertaa lacag bixinta degdegga ah, waxaan ugu raaxeysan karnaa si isdaba-joog ah dhib la'aan. Haddii aan jecelnahay inaan sawirro, Samsung waxay noo siineysaa S Pen ikhtiyaar ahaan, si aan uga faa'iideysanno ugu fiican kan kiniiniga Samsung ah. Waxaa laga heli karaa Amazon oo ah 579 euro oo loogu talagalay nooca Wifi.
Iibso Samsung Galaxy Tab S3
Asus wuxuu na siiyaa ZenPad 3S 10, kiniin ka samaysan aluminium oo leh shaashad 9,7-inji ah oo lagu xallinayo 2048 x 1536, Iyada oo leh saamiga 4: 3, saamiga aan ka dhigaynin qalab ku habboon daawashada filimada ama silsiladda, maaddaama silsiladaha madow ee faraxsan ay qabsanayaan qayb muhiim ah oo shaashadda ah. Asus ZenPad 3S 10 waxaa maamula Mediatek processor-kiisa MT8176 oo ay wehliyaan 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah, keyd aan ku ballaarin karno adoo adeegsanaya kaararka microSD. Qaabkan Asus wuxuu leeyahay culeys dhan 430 garaam, waxaa maamula Android 6, wuxuu ku darsamayaa isku xirka nooca C-ga waxaana lagu qiimeeyaa 380 yuuro Amazon.
Iibso ASUS ZenPad Z500M
Huawei wuxuu noqday mid ka mid ah soo saarayaasha koray sannadihii la soo dhaafay, iyagoo noqday beddelaad keliya dunida casriga ah, laakiin sidoo kale kiniinnada. Shirkada Aasiya, waxay na siineysaa MediaPad M3 Lite 10, oo ah kiniin 10.1-inch ah oo qaraarkiisu yahay 1920 x 1200. Gudaha, waxaan ka helaynaa Processor Qualcomm Snapdragon 435, oo uu weheliyo 3 GB oo RAM ah, Android 7.0, 32 GB oo keyd ah oo aan ku ballaarin karno isticmaalka kaararka microSD.
Sida Samsung oo leh Galaxy Tab S3, Huawei waxay ku sharraxeysaa codka oo qaabkani wuxuu isku darayaa qaar ku hadla waxaa soo saaray Harman Kardon, shirkad ka mid noqotay shirkadda Samsung shirkado. Batariga moodeelkani wuxuu gaarayaa 6.000 Mah, oo sida ay soo saaruhu sheegeen aan u isticmaali karno 13 saacadood oo fiidiyoow ah, waqti aad u dheer haddii aan u hibeyno howlaha fudud. Qiimaha Huawei MediaPad M3 Lite 10 waa 299 euro oo ku taal Amazon.
Iibso Huawei Mediapad M3 Lite 10
Dhibaatooyinka ka taagan magac-bixinta cusub ee ay Samsung adeegsato marka ay timaaddo magacaabidda kiniinnadeeda iyo taleefannada casriga ah ayaa ah qaska oo noqon kara in la iibsado moodel sannad walba la cusbooneysiiyo oo kaliya magaca lagu kala duwo laga helo sannadka, kaasoo mararka qaarkood Kuma jiro sharraxaadda, sidaas darteed waxay u horseedi kartaa jahwareer, sida laga yaabo inay tahay kiiska aan ka hadlayno, Galaxy Tab A 2016.
Haddii aynaan rabin inaan lacag badan ku isticmaalno kiniin, laakiin waxaan dooneynaa inaan helno awood in kabadan oo nagu filan dhowr sano isla markaana aan sameyno wax ka badan kaliya daawashada fiidiyowyada, Samsung waxay na siineysaa Galaxy Tab A (2016), oo ah qaab ay maamusho Exynos 7870 sideed-xarig-processor, oo ah garaafka Mali leh 3, 2 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo keyd gudaha ah oo aan ku ballaarin karno isticmaalka kaararka microSD. Shaashadda 10.1-inch waxay na siineysaa xallinta 1920 x 1200.
Gudaha waxaan ka helnaa Android 6.0 iyo batari 7.300 mAh ah, in ka badan awood ku filan oo aad ku raaxeysan karto adigoon marin xeedho joogto ah. Miisaanka qaabkani waa 525 garaam, xoogaa xad dhaaf ah, laakiin waqti ayaan ku dambayn doonnaa la qabsiga. Waxaa laga heli karaa Amazon 211 euro.
Iibso Samsung Galaxy Tab A (2016)
Shirkadda Aasiya, milkiilaha Motorola, looma reebi karin kala soocidan. Lenovo Tab 4 10, ayaa na siisa shaashad 10.1-inji ah oo leh xallinta 1280 x 800, batari 7000 Mah ah iyo processor Qualcomm Snapdragon 425 oo ay weheliso 2 GB oo RAM ah iyo 16 GB oo keyd ah, oo ah meel aan ku ballaarin karno adoo adeegsanaya kaararka microSD. Lenovo Tab 4 10 waxaa lagu qiimeeyaa Amazon 174 euro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Top 10 kiniiniyada 2017
Fikradayda, waxaad u xiisay Lenovo yoga tab 3 oo lagu daray, kaliya ma ahan awooddeeda iyo shaashadeeda oo leh xalka 2k, laakiin nidaamkeeda dhawaaqa oo leh 4 JBL ku hadla iyo qayb ka mid ah baytarigeeda oo ka badan 9000mah iyo ismaamul ballaaran.
Jawaab ku saabsan DAVID RAMOS MARDONES